Zvipikiri: zvishanu zvakagadzirwa zvekubika kuti zviite kuti vakure!
lactose yemahara kudya
Matipi ekuti bvudzi rako rikure nekukurumidza
Runako	 16 May 2015
Vasikana vazhinji pavanopinda mukuyaruka vanotanga kunetseka, pakati pezvakawanda zvinhu, nezvipikiri zvavo. Iwo mapfupi mafashoni, saamai akacheka, kana kushushikana-kwakazara dhizaini kunosara kumberi uye kumberi kumashure. Kunyangwe vachida kuve nembambo hombe, vazhinji havagone kumirira nguva inodiwa kuti vakure, saka vanoshandisa nzira dzinobatsira mukukura kwakanaka kwembambo. Svika pakuziva mamwe maitiro akareruka, uye kunyange akagadzirwa edzimba, ayo anobatsira nzara dzako kukura.
Maitiro ekuita nzara dzako kukura nekukurumidza? Mazano ekuzvigadzirira!
Kupfuura kuregedza nzara ichikura, inoda kukura iine hutano, saka mamwe maitiro ezuva nezuva anofanirwa kuchinjwa, kusanganisira mune chikafu. Nekudaro, pamusoro pekuchinja maitiro, zvimwe zvakavanzika zvekuitira zvinobatsira kuve nembambo refu, dzakanaka uye dzine hutano.
Chikafu chakapusa uye chakachipa ndechekushandisa ndimu nemukaka, mushure mezvose, ndiani asina izvi zvinoshandiswa pamba?
Sanganisa mukaka nejusi remoni (isina shuga), wobva wanyorova zvipikiri kwemaminitsi gumi nemashanu. Kudzokorora mabikirwo katatu pasvondo munguva pfupi uchaona mhedzisiro, nzara dzakasimba dzinobatsira mukukura.
Rova cucumber usingabvise ganda, isa zvipikiri mubhinzi kwemaminitsi makumi maviri. Maitiro acho anogona kuitwa kamwe chete pasvondo uye zvinenge zvatove kugona kucherechedza mhedzisiro.
Chimwe chinhu chiri nyore-kuwana-chinongedzo kumba uye imwe yeanonyanyo shandiswa kumba-zvipikiri kusimbisa uye nzira dzekukura.
Imwe yedzakareruka nzira dzekuishandisa ndeye kupwanya mazino maviri uye kuisa kunama pazvipikiri zvako kwemaminitsi gumi, uchiita kurapwa uku kwevhiki, mazuva ese. Imwe sarudzo ndeyekucheka zvakanyanya woisa mukati mechipikiri chechipikiri
mvura nemafuta emuorivhi
Fashaidza kapu yemvura uye isa mafurawa maviri emaorivhi, isa maoko ako mumvura inopisa kwemaminitsi gumi. Usasuke maoko ako mushure mekuita, rega chigadzirwa chiite uye chiome zvakasikwa. Iyi kamukira yakapfuma mu vitamini E.
Senge ndimu, orenji zvakare yakakosha pakubatsira kukura zvipikiri, sezvo iine folic acid.
Svina maorenji mana, wobva watora zvidimbu zvedonje wozvinyika mujusi. Siya donje pazvipikiri zvako kwemaminitsi gumi.
Natural supplement yekuita zvipikiri kukura - NOVA REPAIR
Pamusoro peaya matipi uye nzira yekugadzira pamba, ndinoda kutora mukana uno nekukupa imwe yekuwedzera iyo inogona kubatsira nekukura kwembambo, iyo Kugadziridza kutsva. Iyo 100% yakasikwa yekuwedzera, yakagadzirwa kubva kune dzakasarudzwa zvigadzirwa uye ine fomula yakagadzirwa kubva pane yakawanda yekutsvaga. Kugadziridza kweNova kwave kuri pamusika kwenguva yakareba, zvinoratidza kuti icho chigadzirwa chinoshanda chaizvo, uye kuti chakagutsa vatengi, mushure mezvose dai chisingashande, chingadai chakatosiya musika.
Chiito chikuru cheNova Kugadziridza chine chekuita nebvudzi, asi zvinobatsirawo zvipikiri neganda, sezvo zvichipa boka rezvinhu zvinobatsira kusimudzira mwero wemuviri, zvichiita kuti ushande zvakaringana uye izvo zvinosanganisirawo vhudzi, nzara neganda.
Pakati pezvakanaka zvakakosha zvauchacherekedza ndeizvi:
Bvudzi kukura kwenguva yakareba
Bvudzi rakasimba uye rinopenya
Zvipikiri zvinokura nekukurumidza zvakanyanya
Rakawedzera kunaka uye rakasviba ganda
Ndekupi kwekutenga Nova Kugadzirisa?
Kugadziridza kweNova kunongotengeswa pamusoro peinternet, pane yayo yepamutemo webhusaiti, inopa.novarepairoficial.com/. Kuti utenge, ingo svikira webhusaiti uye isa odha yako uchiratidza kero yaungade kuti kuitwe kuitwe, wobva wangoita muripo. Kana usati wajaira kutenga pamhepo, usanetseke, saiti yacho inogamuchira kutengeserana kwezuva nezuva uye inzvimbo yakachengeteka zvachose.
Kuti utenge unogona kubaya pane rinotevera bhatani:
Zvigadzirwa zvinobatsira kusimbisa uye kukura zvipikiri
Pamusoro pemabikirwo akagadzirwa kumba atakataura nezvayo mumusoro wenyaya wapfuura, zvimwe zvigadzirwa zvinogona kubatsirawo mukukura kwembambo uye nekuvabatsira kuti vatosimba, izvo zvinobatsira kudzivirira kuputsa nekutsemura. Ona pazasi zvavari!
Horse Hoof chigadzirwa chakagara chiri pamusika kwemakore, nekuda kwekuita kwazvo uye mhedzisiro yainopa. Iyo mhando ine yakakwana kwazvo chigadzirwa mutsetse, iyo inosanganisira nzara base, kumutsidzira, kusimbisa, hypoallergenic base, pakati pevamwe. Mutengo unodhura kwazvo, uye unogona kuuwana mune chero chemishonga muBrazil, asi kana uchida, unogona kuitengawo paDrogaria Araújo webhusaiti, iyo inopa mitengo mikuru uye, zvichienderana nedunhu raunogara, iri kuendesa pakarepo .
Zvakare neHove Hofisi, Betalfratus zvakare chigadzirwa chinoratidzwa kune avo vasina kusimba, brittle zvipikiri, nekunetseka kukura uye nekutsemura. Inoshanda seiyo enamel, iyo inofanirwa kuiswa kune chipikiri, sezvakaratidzwa pane inoisa package. Icho chigadzirwa chine simba, uye ndosaka tichifanira kufunga kuti mushonga, kwete kungosimbisa chete.
Pamusoro pezvigadzirwa zvinoshandiswa zvakananga pazvipikiri, zvakare zvinonakidza kutaura nezve zvinowedzera chikafu izvo zvinogona kubatsira kusimudzira mwero mumuviri wako, uye nekudaro kubatsira kusimbisa nzara dzako, bvudzi uye ganda hydration. Muenzaniso weiyi Imecap Bvudzi, iro kunyangwe riine zita raro, rinoshandiswa zvakare nevanhu vane matambudziko ekukura kwembambo. Izvi zvinodaro nekuti kazhinji avo vane zvipikiri zvisina kusimba vanewo matambudziko nekurasikirwa nevhudzi, nezvimwe.
Matipi ekuva nezvipikiri zvine hutano
Kunze kwekurega nzara dzako dzichikura, dzimwe tsika dzinofanira kuchinjwa kuitira kuti dzirambe dzakanaka uye dzakagwinya.
Inwa mvura. Mvura inogara yakanakira zvese, kusanganisira kuchengetedza nzara dzako, uye tii yemvura yakanakawo, sezvo ichibatsira kufambisa muviri.
Wanga uchiziva here kuti typing inogona kukubatsira iwe kuva nezvipikiri zvine hutano? Ehe, chiitiko chekutaipa, kunyora, kuridza piyano uye zvimwe zviitiko zvinosanganisira minwe zvinowedzera kuyerera kweropa muzvipikiri uye nekudaro zvinobatsira kukura kwavo.
Rega nzara dzako dzifeme. Nzara dzakapendwa dzakanaka, asi dzinodawo kufema, saka dzisiye dzisina kupenda kwembambo kwemazuva akati wandei kuti dzive dzakasimba uye zvakare dzidzivirire kubva pakuita yero.
Ndikwo kwanhasi, vasikana! Kana uine chero matipi nezve kukura kwembambo, tisiire isu pano mune zvakataurwa!
58 pfungwa pa "Maitiro ekuti nzara dzako dzikurumidze kukura uye kusimba? Ona mamwe matipi!"
Kukadzi 26, 2016 pa16: 27 am - pepeta
Chivabvu 31, 2016 pa19: 33 pm - pepeta
Oiee ndatenda nemazano !!
Chikumi 28, 2016 pa14: 29 pm - pepeta
Aya matipi anogona kushandiswa nezvipikiri zvakapendwa ???
Chikunguru 1, 2016 pa09: 59 am - pepeta
Ivo vanonyanya kuitwa netii isina kuiswa. Nenzira iyi mavitamini anokwanisa kusvika akananga kumisodzi yezvipikiri.
Chikunguru 1, 2016 pa18: 17 am - pepeta
Iyo gariki tip, isu tinoshandisa kangani nguva kuti Q iwane kugadzirisa?
Chikunguru 4, 2016 pa11: 08 am - pepeta
Unogona here kushandisa mvura nemafuta kupenya mushure?
Chikunguru 25, 2016 pa12: 46 am - pepeta
ndinokura sei chipikiri mumazuva matatu
Chikunguru 26, 2016 pa10: 55 am - pepeta
Mhoro Gabrielle! Iyo yakanaka ndeye kushandisa nzara dzenhema mune ino kesi.
Zvita 27, 2016 pa10: 04 am - pepeta
Kushandisa nzara yenhema kunokanganisa nzara inodikanwa.
Zvita 28, 2016 pa11: 36 am - pepeta
Zvinoenderana nechipikiri uye nemashandisiro aunozviita iwe, mudiwa.
Nyamavhuvhu 8, 2016 pa07: 22 pm - pepeta
Zvipikiri zvangu zvinotora nguva yakareba kuti zvikure uye kana zvamera zvinotyoka zviri nyore
Nyamavhuvhu 8, 2016 pa10: 15 pm - pepeta
Mhoro Ana! kutora chinowedzera kuti ubatsire kusimbisa nzara dzako zvinogona kunakidza mune yako kesi. Ko nezvekuziva Nova Kugadzirisa? Kunze kwekutarisira kwembambo, inoshandawo pane bvudzi, ichiita kuti ive yakasimba uye inopenya. Dzvanya pazasi kuti udzidze zvimwe: http://bit.ly/suplemento-unhas-cabelos
Nyamavhuvhu 17, 2016 pa01: 59 pm - pepeta
Ini ndaida iwo matipi andichatanga kuita nhasi uye ndanga ndichizvibvunza kuti mangani mazuva zvinotora kukura saizi yakaenzana kubva kumufananidzo uko pakutanga ??
Nyamavhuvhu 17, 2016 pa12: 19 pm - pepeta
mhoro ndaida matipi andaida kuziva kuti dmr yekukura saizi ya ft pakutanga zvakadii uchishandisa cucumber nemukaka une ndimu ??
Nyamavhuvhu 19, 2016 pa11: 52 pm - pepeta
Izvi zvinoenderana nekukura kwembambo yako, hutano hwako huri sei, zviitiko zvipi zvaunoita, zvichingodaro. Iko hakuna mutemo.
Nyamavhuvhu 26, 2016 pa14: 24 pm - pepeta
Mhoro! Ndine mazuva gumi nerimwe ekukura nzara dzangu. Pane imwe nzira yakakodzera?
Nyamavhuvhu 26, 2016 pa15: 09 pm - pepeta
Tarisa, Esteri. Zvinoenderana nekuti unoda zvakadii kuti vakure uye kuti mbambo yako yakakura sei nhasi. Wakambofunga nezvekushandisa nzara dzenhema here? Ndatoshandisa iyi template pano: http://bit.ly/unhas-posticas-modelo-testado Yakanga iri nyore kushandisa, uye vakagara kweinopfuura vhiki pazvipikiri.
Gumiguru 13, 2016 pa17: 54 am - pepeta
Ini ndoda kukura nzara yangu mu1 mwedzi ndeipi nzira iri nani?
Gumiguru 14, 2016 pa09: 47 am - pepeta
Unogona kuedza kushandisa zvigadzirwa zvinosimbisa. Asi kana iwe uchiri kufunga kuti hausi saizi yaunoda, unogona kuedza kushandisa zvipikiri zvenhema. Ini ndatoedza uyu modhi: http://bit.ly/unhas-posticas-modelo-testado uye yakanga yakanaka! Ivo vaive echisikigo uye vakagara kweinopfuura vhiki pazvipikiri.
Gumiguru 28, 2016 pa19: 04 am - pepeta
chinhu chinotonhorera fernanda asi handisi kurega kuruma nzara dzangu
Mbudzi 5, 2016 pa 00:29 - pepeta
Ini ndichaita mukaka wemonimu, yakakodzera mushure memaminitsi gumi nemashanu ndeyekusuka kana kuirega iwedzere kuita?
Mbudzi 8, 2016 pa 20:47 - pepeta
Nzara dzangu dzinotora nguva yakareba kuti dzikure uye padzinomera dzinotsemuka nekupepeta chiso
Mbudzi 12, 2016 pa 20:20 - pepeta
Ndeipi yemaitiro aya anoita kuti zvipikiri zvikure nekukurumidza ????????????
Mbudzi 23, 2016 pa 13:20 - pepeta
OLA FERNANDA! NDICHANYANYA MVURA NEMafuta OOLIVI KUBVA KU OLIVIA ASI ZVICHATora MAZUVA ANGANI KUTI UVE SIZE REKUTANGA LA PHOTO
Mbudzi 24, 2016 pa 12:25 - pepeta
Zvinoenderana nekuti unozviita kangani uye kana nzara dzako dzichikura zvakanaka. Kana iwe uine kukurumidzira, chakanakira kuve nezvipikiri zvenhema. Ini ndatoedza uyu modhi: http://bit.ly/unhas-posticas-modelo-testado.
Mbudzi 28, 2016 pa 00:29 - pepeta
Izvo zvinonyanya kukodzera kune vanhu vanoda kuve nembambo hombe uye vakajaira kuruma nzara, ndibatsireiwo, ndakaedza zvinhu zvakawanda, amai vangu havandibvumidze kushandisa nzara dzenhema uye handizive kuita zvekare, ini ndichagadzira chidimbu chemitambo pakupera kwegore chikoro uye ndinoda nzara dzangu hombe
Zvita 2, 2016 pa17: 11 am - pepeta
Mhoroi ndinodya nzara dzangu asi rwendo rwuno ndiri kuyedza kusadzidya saka ndanga ndichida kukubvunza kuti Ndinoita sei kuti dzikure mumwedzi ??? ❤❤ ????????????????? ??????? ??????????????????????????
Zvita 26, 2016 pa18: 35 am - pepeta
Mushure memaminitsi gumi (muresipi yegariki) unogona kushambidza maoko ako here kana kuti unofanira kuisiya pachipikiri chako?
Ndira 9, 2017 pa09: 23 pm - pepeta
Muto weorenji uye kwasara mazuva mangani ????
Ndira 11, 2017 pa20: 45 pm - pepeta
Mhoroi, ichokwadi here kuti kana iwe ukaisa zvidimbu zvidiki zvegariki mune base, zvinobatsira kusimbisa uye kukura nzara dzako? Ndinokutendai nemazano…: 3
Ndira 11, 2017 pa20: 47 pm - pepeta
Uye mafuta ekumhanyisa emucheche akanakawo pakusimbisa nzara dzako, vasikana !! =] #Gara!
Ndira 12, 2017 pa15: 08 pm - pepeta
Ini ndaida kuziva kana mumiriri achiisa mvura muto wepipin, kana kungoirova mu blender?
Ndira 12, 2017 pa17: 30 pm - pepeta
Ndira 12, 2017 pa15: 21 pm - pepeta
<3 Garlic yakagayiwa mukati mechigadziko, inopa kunhuwirira kwakashata here kana kuti zvakajairika?
Ndira 28, 2017 pa14: 08 pm - pepeta
Fernanda pfv ndibatsireiwo iyo gariki tip inoshanda?
Ndira 31, 2017 pa16: 16 pm - pepeta
Ndira 29, 2017 pa15: 00 pm - pepeta
Muvhidhiyo iwe yaunoti isu tinofanirwa kushandisa katatu pazuva, ndinoda kuziva kana ndikaibvisa ndisati ndaishandisa zvekare, kana ini ndinoisa rimwe dara pamusoro peimwe?
Ndira 31, 2017 pa15: 32 pm - pepeta
Mhoroi, ndinoshandisa gel rakanaka kwazvo rinobatsira nzara dzangu kukura uye kusimba, iri Locycare, ingo pedza kaviri pazuva pazvipikiri zvako, zvinogona kunge zvine nzwara kana kwete, ndichaenda pamusoro pechaipikiri, iwe unowana mhedzisiro ! Ini ndinoshandura chigadzirwa ichi nemafuta eGranado kusimbisa nzara nekunyorova cuticles, yakanaka futi !! Asi chakanakira kuedza kushandisa zvinosimbisa uye kuita zvipikiri svondo rega rega kuitira kuti vanhu vakaita seni vanoruma nzara vadzire kuti zvikure, kana ukashandisa nzara dzenhema mhedzisiro yacho yakanaka, asi zvinotora nguva yakareba kuti ikure nekuti inopera simba .. zvirinani neni ndizvo zvazviri! kutsvoda
Ndira 31, 2017 pa16: 15 pm - pepeta
Kutenda nemazano, Bruna!
Kukadzi 7, 2017 pa11: 59 am - pepeta
Mhoroi! Iyo yekubheka remoni nemukaka inofanirwa kugadzira iyo nyowani nzira pamazuva apfuura kana iwe unogona kushandisa iwo mamwe mazuva matatu evhiki?
Kukadzi 7, 2017 pa17: 32 am - pepeta
Izvo zvakanaka kuzviita pese paunoshandisa. Kana ikasiiwa muchitoro, inogona kurasikirwa nemidziyo yayo.
Kukadzi 27, 2017 pa15: 03 am - pepeta
Ndazvida ???????? ☺
Kubvumbi 19, 2017 pa13: 59 pm - pepeta
nzara dzangu idiki ndaida kudziita zvakafanana nemumufananidzo ndoita sei
Kubvumbi 19, 2017 pa14: 01 pm - pepeta
iyo yakapurwa gariki inosanganiswa mumushonga wemazino ??? uye siya maminetsi mangani
Kubvumbi 24, 2017 pa12: 34 pm - pepeta
Mhoro Fernanda! ndedzipi nzira dzaunokurudzira kuti mbambo yangu ikure muvhiki. Ane kukura kwakanaka. Chipikiri changu chinokura zvakapfava uye chinotokombama uye chiri kutsvedza padivi, uye handigone kushandisa chipikiri chenhema.
Kubvumbi 25, 2017 pa01: 04 pm - pepeta
Ndinoda kuziva kana ndichigona kushandisa hwaro hunoratidzwa muvhidhiyo uye zvakare mabikirwo emarimu nemukaka nemvura nemvura, kana paine dambudziko rekushandisa ese ari matatu?
Kubvumbi 25, 2017 pa11: 37 pm - pepeta
Unogona kuishandisa panguva imwe chete, Camila. Asi chakanakira kuita chimwe panguva kuti uone zvinoshanda zvakanyanya kwauri!
Chivabvu 7, 2017 pa07: 32 pm - pepeta
Kutonhorera ndanga ndisingade, ndave kushandisa ndimu nemukaka manzwiro
Chikumi 2, 2017 pa11: 09 pm - pepeta
Ndiri kugadzira keresipi yemandimu nemukaka… imvura here kana hupfu ???
Chikumi 20, 2017 pa17: 00 pm - pepeta
chero munhu anodikanwa
Chikumi 20, 2017 pa17: 01 pm - pepeta
Iyi ine mvura nemafuta inoshanda kangani pavhiki?
Nyamavhuvhu 1, 2017 pa12: 27 pm - pepeta
Unogona here kushandisa vhiniga uye kugara maminetsi matatu kusvika mashanu pachipikiri? Une dambudziko rekusiya here?
Nyamavhuvhu 30, 2017 pa11: 23 pm - pepeta
Ndira 2, 2018 pa19: 01 pm - pepeta
Ini ndakada iwo matipi !! Ndaiwanzoruma nzara dzangu zvakanyanya, ndaitobuda ropa. Asi nhasi, ndinotenda Mwari ndakasiya tsika iyi. Inenge inenge mwedzi. Nhasi nzara dzangu dzarebesa, asi dzichiri kupera simba nekuti ndanga ndichitsenga kwemakore. Ndakafunga kuti handife ndakakwanisa kumira kuruma, kuti handaizorarama ndisina kuruma nzara dzangu. Asi kutaura chokwadi, ndakaona kuti hazvisi zvakaoma… ❤
Ndira 2, 2018 pa19: 04 pm - pepeta
Kukanganwira. Vasati vataura chero chinhu, ini ndakanyora gnawing zvisirizvo, pasina chirevo kuna ????
Zvita 28, 2018 pa20: 19 am - pepeta
Mhoroi ndine tip tb chinova chinhu chandinoshandisa, muto wemandimu uye cucumber unorova maPeninos neganda uye wobva wawedzera madonhwe mashoma emonimu zvichienderana nekuwanda kwemagaka awakaisa !!! Ndinovimba izvi zvinobatsira ❤
Nzira yekubvisa pimples? Ziva zvaunOFANIRA kuita!
Kurapa Kwepamba Kwemweya Wakaipa: Ona Matipi Ekumisa!
Sinamoni: Ndeapi mabhenefiti? Nemhedzisiro yacho? Une zvinopesana here?